'अष्ट्रेलियामा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट संस्थाहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विविधता आवश्यक' - Himalayan Kangaroo
‘अष्ट्रेलियामा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट संस्थाहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विविधता आवश्यक’
Posted by Himalayan Kangaroo | १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १४:२७ |
अष्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा संचालित इभेन्ट म्यानेजमेन्ट संस्था ‘सही हो इभेन्ट्स एण्ड इन्टरटेनमेन्ट’ले विगत केही वर्षदेखि नेपाली समुदायको लागि विभिन्न किसिमका मनोरन्जनात्मक, सहयोगी र प्रभावकारी कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ।
प्रस्तुत छ सही हो इभेन्टसका डाइरेक्टर सुजन खरेलसंग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी:
इभेन्ट म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
सुरुमा त्यस्तो योजनाबद्ध तरिकाले लागेको होइन। हामी चार / पाँच जना साथीहरु मिलेर ‘फन्ड कलेक्सन’को उद्देश्यले एउटा बार्बिक्यु कार्यक्रम राखेका थियौं। त्यसमा प्रतिक्रिया पनि राम्रो पायौं र हाम्रो उद्देश्य पनि धेरै हदसम्म प्राप्त गर्यौं। यसले गर्दा हामीलाई थप कार्यक्रमहरु गर्ने हौसला मिल्यो। त्यसपछि हामीले क्रुज पार्टी आयोजना गर्यौं। क्रुज पार्टी हामीले सोंचेभन्दा पनि भव्य बन्यो। त्यहींबाट हाम्रो यात्रा ‘सही हो’ सुरु भएको हो।
‘सही हो’को यात्रा कहिले देखि सुरु भएको हो ?
२०१६ साल डिसेम्बर महिना देखि।
त्यसयता ‘सहि हो’ले आयोजना गरेका कार्यक्रम कत्तिको सफल भएका छन् ?
सुरुमा गरिएको क्रुज पार्टी देखि लिएर, साइलेन्ट डिस्को, यसपाली दशैंमा लगायत सबैजसो कार्यक्रमहरुमा हामीले नेपाली समुदायको असाध्यै धेरै माया पायौं। यसपाली दशैंमा कार्यक्रम त दोस्रो सिजन समेत गर्यौं। यसका साथै हामीले नेपाली चलचित्रहरु जात्रै जात्रा र सेल्फी किङ्ग प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजना गर्दा पनि दर्शकको साथ उत्तिकै रुपमा पायौं। त्यस्तै, स्पोन्सर गर्ने संस्थाहरुबाट पनि राम्रो सहयोग पाइरहेका छौं।
अष्ट्रेलियामा नेपाली कार्यक्रमहरु धेरै आयोजना भइरहेका हुन्छन्। आयोजक संस्थालाई यी कार्यक्रम आयोजना गर्न कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ?
हेर्दा रमाइलो र आकर्षक देखिन्छ। तर यो क्षेत्र एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। त्यसमा पनि यहाँ नेपालीहरुको थोरै जनसंख्याको बीचमा धेरै कार्यक्रमहरु हुन्छन्। अर्कोतिर स्पोन्सर पनि सिमित हुन्छन् र ती एकै स्पोन्सरकहाँ अनुरोध लिएर हामी धेरै आयोजक पुगिरहेका हुन्छौं। त्यसैले सुरु गर्न सजिलो छ, तर यसमा निरन्तरता दिन एकदमै गाह्रो छ।
यो चुनौतीलाई कम गर्न अथवा यस क्षेत्रलाई राम्रो र सम्भावनायुक्त बनाउन के गर्नुपर्ला ?
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मुख्य हो। कसैले कार्यक्रम आयोजना गर्ने घोषणा गर्यो भने त्यही मितीमा आफ्नो कार्यक्रम नबनाऔं। पर्व या विशेष अवसरमा कार्यक्रम आयोजना गर्दा सल्लाह गरेर कसैलाई हानी नपुग्ने गरी मिती तय गरौँ। उस्तै कार्यक्रम गर्नुभन्दा फरक-फरक ढांचाका कार्यक्रम ल्याऔं। यसले गर्दा हामी मात्र नभई दर्शक, श्रोता र स्पोन्सर गर्ने संस्थाहरुलाई पनि राम्रो हुन्छ।
अहिले कोरोना महामारीको समयमा इभेन्ट क्षेत्रमा कस्तो असर परिरहेको छ ?
कोरोना महामारीका कारण क्षती पुगेका प्रमुख क्षेत्रमध्ये इभेन्ट म्यानेजमेन्ट पनि हो। सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने भएपछि कार्यक्रम गर्नसक्ने सम्भावना रहेन। तर विकल्पको रुपमा भर्चुअल कार्यक्रम भने गर्न सकिन्छ। हामीले पनि द जीएमआईसंग सहकार्य गरेर टिकटक प्रतियोगिताको आयोजना गरेका छौं। प्रतियोगिता अहिले भर्चुअल रुपमै संचालनमा छ।
इभेन्ट क्षेत्र कोरोना महामारी पछि उठ्नेछ भन्ने कत्तिको आशा राख्नुभएको छ ?
आशा छ, तर समय भने लाग्छ। कोरोना विरुद्ध खोप नआउँदासम्म र सबैको लागि सर्वसुलभ नहुँदासम्म इभेन्ट क्षेत्र पहिलेकै अवस्थामा आउंदैन। त्यसपछि पनि यो बीचको समयको घाटा पूर्ति गर्नुपर्यो। माथि उठ्न त केही वर्ष लाग्छ होला।
सही हो इभेन्टलाई साथ दिने सम्पूर्ण स्पोन्सर संस्थाहरुप्रति हामी कृतज्ञ छौं। सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई यो माया तथा शुभेच्छाको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौं।
Previousसाउथ अष्ट्रेलियामा ४५ वर्ष उमेर नाघेका र अंग्रेजीमा कम दक्ष भएकाहरुलाई पनि पीआरको अवसर
Nextयसरि बनाउन सकिन्छ स्वादिष्ट आलुदम ( भिडियो )
११ आश्विन २०७४, बुधबार ०१:५१
२७ मंसिर २०७५, बिहीबार ०८:२३